साहित्य पवित्र परिकल्पना हो - Dr. Nawa Raj Subba
यसले कतिपय राम्रा कुराहरु प्रयोग भइरहेका छन् भनें हुबहू नक्कल गर्दा चाहीं हाम्रो नेपालीपन हराएर जाने खतरा पनि छ । लामो समयदेखि नेपालीले एउटा छवी नै बनाइसकेका छौं । अहिले आएर पश्चिमा साहित्य मात्र हैन, विश्वमा आएको परिवर्तनले पनि नेपाली साहित्यलाई असर पारेको छ । तर पनि नेपाली बाङ्मय, साहित्यको आफ्नोपनलाई जोगाउन जरुरी छ ।
तपाई धेरै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, आफुलाई कुन विधाबाट चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
मैले कविता, गीत, निबन्ध र अहिले आएर केही गजलहरु पनि लेखेको छु । सुरुमा मैले लेख्न सिकेको कविता र निबन्ध नै हो । साथसाथै मैले गीत पनि लेखें । तर अहिले आएर कविता लेख्दा चाहीं आफुलाई आत्मसंतुष्टि बढी मिल्छ । र कवितामा व्यक्त गर्न नसकेका कुराहरु निबन्धमा समेट्ने गर्छु । गीत चाहीं साहित्यको बेग्लै विद्या हो । त्यसैले मलाई गीतमा बढी आनन्द आउँछ र कवितामा संतुष्टि मिल्छ ।
तपाई जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रशासक पनि हुनुहुन्छ । तपाई बढी सरकारी कर्मचारी कि साहित्यकार ?
मेरो पहिलो कर्तव्य चाहीं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको पेशात दायित्व पुरा गर्नु नै प्रथम दायित्व हो । यसलाई नै मैले पहिलो प्राथमिकता दिएको छु र दिनुपनि पर्छ । साहित्य र संगीत क्षेत्र चाहीं मेरो दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । कार्यालयको काम गरेर उब्रेको बचेको समयलाई साहित्यमा लगाउने गरेको छु । साहित्य र कलामा यो मेरो जागीर भन्दा पहिलेदेखि नै लगाव भएकोले छोड्न सकेको छुइन । साहित्य र संगीतमा लाग्दा मलाई मानसिक रुपमा स्वस्थ र संतुलित हुनलाई सहयोग गरेको छ । मेरो जागीरे जीवन पछाडि पनि मलाई चिनाउने क्षेत्र भनेको साहित्य नै भएकोले अब चाहीं मलाई साहित्यकारकै रुपमा चिनिदिए हुन्थ्यो भन्ने लोभ पलाएको छ ।
हालै मात्र प्रकाशित ‘यात्रा आधा सताब्दीको’ नामक कविता संग्रहको कस्तो प्रकारको पुस्तक हो ?
यो कविता संग्रहमा म ५० वर्षपुगेको यो महत्वपूर्ण कालखण्डको अनुभवलाई कविताको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरेको छु । यो कालखण्डमा म मात्र हैन, समाजको, देशको र विश्वको जुन विकासक्रम छ, त्यो पनि मेरो जीवनसंग गासिएको छ । त्योसंगै मेरो साहित्यिक यात्रालाई पनि समेटेर पाठकहरुलाई उपहार स्वरुप निकालेको हो । त्यसमा मेरो जीवनको ५० वर्षो अनुभव, सफलता, विफलताका कुराहरु मैले देखे भोगेका कुराहरुलाई पनि प्रतिबिम्बित गरेको छु ।
केही नव साहित्यकारहरुले बढी पैसा खर्च गरेर राम्रो अध्ययन नगरी कृति प्रकासन गर्दा वास्तविक साहित्यकारहरुलाई के असर परेको छ ?
यो त धेरै ख्याल गर्नुपछ । संख्या बढाउने उद्देश्यले मात्र कृति निकाल्नु हुदैन । यसले गर्दा पुराना, परिपक्क र वास्तविक र्सजकहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । र्सजकहरु स्वयं परिपक्व भए भनें मात्र परिस्कृत सिर्जना पस्कन सकिन्छ र समाजलाई ठोस सन्देश दिन, बाटो देखाउन सक्छ । त्यसैले हतार नगरीकन कुनै सृजना प्रकाशन गरेमा साहित्यलाई ठूलो योगदान गर्छ ।
साहित्यकारहरु यथार्थ भन्दा बढी भावनामा बग्छन् भनिन्छ नी !
हामी साहित्यकारहरुलाई भावनामा बग्ने र अब्यवहारिक समूह भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ त्यो केही हदसम्म सत्य पनि हो । साहित्यकारहरुलाई धेरै आगाडिदेखि नै एक प्रकारको एकाङ्की समूह देखियो तर यसको चाही म पनि विरोधी हो । साहित्यलाई र्सवसाधारण मानिसले बुझ्ने विषयवस्तु बनाइनु पर्छ । सबै मान्छेमा भावना हुन्छ, साहित्यिक संवेगले छोएको हुन्छ । तर आत्माकेन्द्रित भएर लेखिएको साहित्यले चाहीं तपाईले भनेजस्तै बढी भावुक मात्र भएर गन्तव्यहीन क्षणमा पुर्‍याउँछ ।
नयाँ प्रयोग गर्ने नाममा उच्छृंखल र अस्लील शब्दहरु पनि प्रयोग भएको पाइन्छ, यसले समाजलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ?
यसले पटक्कै राम्रो गर्दैन । साहित्यमा प्रयोगको सामाजिक मर्यादालाई नाघेर बोलिने संबोधन गरीने शब्दहरुको प्रयोग हुनुहुदैन । साहित्य भनेको पवित्र परिकल्पना हो । त्यसमा भोलीको हामीले कल्पना गरेको संसार पनि हुन्छ । त्यस्तो सुन्दर र पवित्र साहित्यमा उच्छृंखल शब्द ल्यायौं भनें छाडापन भित्रिन्छ ।
आफ्नो सृजना बिक्री गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छ ?
राम्ररी बजारको व्यवस्थापन गरेर व्यवसायिक हिसावले राम्रा कृतिहरु निकाल्यौं भनें नोक्सान हुदैन । बाच्ने नै अवस्था नभए पनि नोक्सान चाहीं हुदैन । तै पनि र्सजकहरुलाई पुस्तक लेखेर नै जीवीकोपार्जन गर्न त निक्कै मुश्किल छ ।
साहित्य क्षेत्रको विकासका लागि राज्यका तर्फाट के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ?
मेरो विचारमा राज्यको तर्फबाट कमसेकम गाउँगाउँमा पुस्तक पसल खोलिनुपर्छ । सकिन्छ भनें अझ वडा वडामा खोलियोस् । गाविसलाई दिइएको अनुदानबाट पुस्तक किन्ने नीति बनाइयोस् ।
अब बन्ने संविधानमा साहित्यकारका विषयमा कस्तो कुरा समावेश गर्नु पर्छ ?
साहित्यकारहरुलाई अहिले संगठित भएर आफ्ना सिर्जनाहरु प्रकाशित गर्ने मञ्चको अभाव छ । जमघट, चिन्तन, अध्ययन, अनुसन्धानको साहित्यमा ज्यादै कमी छ । संविधानमा र्सजकहरुलाई संगठित हुने नीति बनोस् । सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
प्रस्तुति : मोहन भट्टराई
साभार : ‘प्रतिदिन’ दैनिक वर्ष३, अंक १६७ साउन १, २०६८ आइतबार प्रकाशित
Previous: सहिदलाई सलाममा विविध सन्दर्भका गीत (ध्रुव मधिकर्मी)
Next: दुर्व्यसन विरुद्ध गीत